Ithimba lokuhlela | Izindaba Zokuhamba
I-Actualidad Viajes iwebhusayithi ye-Actualidad Blog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe ku- umhlaba wokuhamba futhi kuyo siphakamisa izindawo zokuqala lapho sihlose ukuhlinzeka ngalo lonke ulwazi nezeluleko mayelana nokuhamba, amasiko ahlukahlukene omhlaba nokunikezwa okuhle kakhulu nemihlahlandlela yezivakashi. Iminyaka eminingana eminingi sikhiqize i- i-podcast yokuhamba ebiphumelele impela, ifinyelela i- indawo yokuqala kuma-European Podcast Awards esigabeni seBhizinisi eSpain nesesine eYurophu ngonyaka ka 2011 kanye nokuba ngowamanqamu eminyakeni 2010 y 2013.
Ithimba lokuhlela le-Actualidad Viajes lakhiwe izihambi ezinothando nama-globetrotters azo zonke izinhlobo bayakujabulela ukwabelana ngolwazi lwabo nolwazi lwabo nawe. Uma futhi ufuna ukuba yingxenye yawo, unganqikazi sibhale ngaleli fomu.
Kusukela ngiseyingane ngithanda ukwazi ezinye izindawo, amasiko nabantu bazo. Lapho ngihamba ngithatha amanothi ukuze ngikwazi ukukuthumela kamuva, ngamagama nangemifanekiso, ukuthi leyo ndawo iyini kimi futhi ingaba yinoma ngubani ofunda amagama ami. Ukubhala nokuhamba kuyafana, ngicabanga ukuthi bobabili bayisa ingqondo nenhliziyo yakho kude kakhulu.
Ukwabelana ngokuhlangenwe nakho kwami ​​emhlabeni wonke nokuzama ukusabalalisa uthando lwami lokuhamba kuyinto engiyithandayo. Futhi yazi amasiko wamanye amadolobha futhi nakanjani ukuzijabulisa. Ngakho-ke ukubhala ngalezi zinkinga, ukukuletha eduze nomphakathi jikelele, kungigcwalisa ngokwaneliseka.
Bengilokhu nginothando ngezilimi ezivela emhlabeni wonke. Ngakho-ke njengothisha wesiNgisi, ngiyakuthanda nokwazi lezo zilimi noma izilimi ezahlukahlukene. Uhambo ngalunye engiluthathayo ukufunda okusha engizokukhumbula impilo yami yonke.
Ngithweswe iziqu kwezokukhangisa, ngithanda ukubhala nokuthola izindaba nezindawo ezintsha uma nje ngikhumbula. Ukuhamba kungenye yezinto engizithandayo futhi yingakho ngizama ukuthola lonke ulwazi ngalezo zindawo engithemba ukuzibona ngelinye ilanga.
Bathi kunezinhlobo eziningi zabahambi njengoba kunabantu emhlabeni. Kukho konke ukuhambela kwami ​​ngabona izintshisekelo ezahlukahlukene esingangena kuzo, ngakho-ke e-Actualidad Viajes ngizokunikeza imininingwane oyidingayo ukuze ujabulele amaholide akho ngokugcwele kunoma iyiphi indawo emhlabeni.
Ngicabanga ukuthi ukuhamba ngesinye sezipiliyoni ezicebile umuntu angaphila ... Ihlazo, leyo mali iyadingeka kulokhu, akunjalo? Ngifuna futhi ngizokhuluma ngazo zonke izinhlobo zohambo kule bhulogi kepha uma ngizonikeza ukubaluleka kokuthile, yilezo zindawo engiya kuzo ngaphandle kokushiya inhlanhla ngisendleleni.
Njengoba ngangimncane ngangihlale ngifuna ukuhamba futhi kancane kancane ngakwazi ukuba umhambi ongakhathali. Izindawo engizithandayo: i-India, iPeru ne-Asturias, yize kunezinye eziningi. Ngiyakuthanda ukurekhoda kuvidiyo engikuthandayo futhi ngaphezu kwakho konke ukuthatha izithombe zakho ngokungathi kungumJapan. Ngiyakuthanda ukuzama i-gastronomy yendabuko yendawo engiyivakashelayo futhi ingilethele izindlela zokupheka ezimbalwa nezithako zokwenza ekhaya futhi ngikwabele wonke umuntu.